छानविन प्रतिवेदनवाट भयो अर्काे गम्भिर खुलासा, अपराधि लुकाउन प्रहरीले यस्तो सम्म गरेको रहेछ !! सबैलाई सक्दो शेयर गरौ – PathivaraOnline
Home > समाचार > छानविन प्रतिवेदनवाट भयो अर्काे गम्भिर खुलासा, अपराधि लुकाउन प्रहरीले यस्तो सम्म गरेको रहेछ !! सबैलाई सक्दो शेयर गरौ
छानविन प्रतिवेदनवाट भयो अर्काे गम्भिर खुलासा, अपराधि लुकाउन प्रहरीले यस्तो सम्म गरेको रहेछ !! सबैलाई सक्दो शेयर गरौ
काठमाडौं, २१ असोज । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको अनुसन्धानका क्रममा जिल्लाका तत्कालिन प्रहरी प्रमुख डिल्लीराज विष्ट सहितको टोलीले घटनाको प्रमाण लुकाउन गम्भिर गल्ती गरेको खुलासा भएको छ । आइतवार गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सो कुरा खुलाइएको छ । प्रहरीले घटनामा संलग्न अपराधि पत्ता लगाउन केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको नमुना नै प्रहरीले हेरफेर गरेको खुलासा भएको छ । सो घटनावाट प्रहरी घटनाको वास्तविक अपराधि पत्ता लगाउन भन्दा पनि प्रमाण लुकाउने तर्फ केन्द्रित भएको गम्भिर खुलासा गरेको छ ।
कञ्चनपुर तत्कालिन प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लराज विष्टसहितको टोलीले प्रयोगशालामा पठाइएको नमुनामै हेरफेर गरेको खुलासा गरेको छ । प्रहरीले भदौ ८ गते विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको नमुनालाई फेरी दोस्रो पटक फरक नमुना पठाएर सच्याएको भनिएको छ । प्रहरीले भदौ ४ गते मुचुल्का तयार पारेर ८ गते अमित गोल्ड लेखिएको निलो कट्टु, निलो रंगकै गन्जी र खैरो रंगको जिन्स हाफपाइन्ट नमुनाका रुपमा प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको उल्लेख छ । तर त्यसको २ दिन पछि नै गलत नमुना गएको भन्दै उच्याइएको उल्लेख गरेर पत्र पठाएको छ ।
प्रतिवेदनमा सो कुरालाई यसरी उल्लेख गरिएको छ ‘सेतो गञ्जी हुनुपर्नेमा नीलो रंगको सेन्डो गञ्जी हुन गएको र हाप पाइन्ट हुनुपर्नेमा नीलो रंगको हाफ पाइन्ट हुन गएकाले सच्चाइदिनुहुन अनुरोध गरेको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रहरीले घटना भएको २६ दिन पछि अभियुक्तका रुपमा मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका ४१ वर्षीय दिलिप सिंह विष्टलाई पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको थियो । मुचुल्कामा उल्लेख भएको निलो कट्टु, गञ्जजी र हाफ पाइन्ट दिलिपसिंह विष्टको घरबाट बरामद भएको थियो ।
प्रहरीले वास्तविक अपराधिलाई जोगाएर विष्टलाई दोषी प्रमाणित गर्न नमुना परिर्वतन गराएको पाइएको छ । नमुना बनाउन विष्टले शौचालयमा हस्तमैथुन गरेको र हातमा विर्य लगाएर आएका थिए ।
त्यसपछि विष्टबाट बरामद भएको सोही नयाँ नमुना प्रयोगशालामा पठाएको छानविन समितिले ठहर गरेको छ । ‘छानविन समितिका एक सदस्यले मुचुल्कामा उल्लेख गरेको नमुना परिवर्तन गरेर नयाँ नमुना पठाउनु नै अपराधि लुकाउन खोजिएको प्रष्ट हुन्छ ।
निर्मलाको सामुहिक बलात्कार भएको ठहर – पूरा हेर्नुहोस र सक्दो शेयर गर्नुहोस
बाजुराबाट अायो सबैलार्इ रूवाउने यस्तो खबर किशोरीको दुःखद मृत्यु….